AHOANA NY FANOVANA NY LAHARAM-PAHAMEHANA AMIN'NY CPU AMIN'NY WINDOWS 10 - MALEMY
Ahoana ny fanovana ny laharam-pahamehana amin'ny CPU amin'ny Windows 10
Ahoana ny fanovana ny laharam-pahamehana amin'ny CPU ao amin'ny Windows 10: Ny fomba fiasan'ny fampiharana amin'ny Windows dia ny fizarana ny loharanom-pahalalana rehetra amin'ny rafitrao eo anelanelan'ny fizotrany mihatra (fampiharana) mifototra amin'ny ambaratonga laharam-pahamehany. Raha fintinina, raha misy dingana (fampiharana) manana laharam-pahamehana amboniny dia homena loharanom-pahefana bebe kokoa ho an'ny fahombiazana tsaratsara kokoa. Ankehitriny dia misy ambaratonga laharam-pahamehana 7 toy ny Realtime, High, Above Normal, Normal, Below Normal, ary Low.
Ny ara-dalàna dia ny haavon'ny laharam-pahamehana izay ampiasain'ny ankamaroan'ny fampiharana fa ny mpampiasa kosa dia afaka manova ny haavon'ny laharam-pahamehana amin'ny fampiharana. Saingy vetivety ihany ireo fanovana natao tamin'ny laharam-pahamehana nataon'ny mpampiasa ary rehefa tapitra ny fizotran'ny fampiharana dia napetraka ho ara-dalàna indray ny laharam-pahamehana.
Ny fampiharana sasany dia manana ny fahaizana manamboatra ny laharam-pahamehana ho azy ireo arakaraka ny filany, ohatra, WinRar dia afaka manitsy ny haavon'ny laharam-pahamehana ho an'ny Above Normal mba hanafainganana ny fizotran'ny arisiva. Ka tsy mandany fotoana le's jereo Ahoana ny fanovana ny laharam-pahamehana amin'ny CPU Process ao amin'ny Windows 10 miaraka amin'ny fanampian'ny tutorial eto ambany.
Fanamarihana: Hamarino tsara fa tsy apetrakao amin'ny Realtime ny haavon'ny laharam-pahamehana satria mety hiteraka tsy fandriam-pahaleman'ny rafitra izany ary hahatonga ny rafitrao hivaingana.
Fomba 1: Manova ambaratonga laharam-pahamehana amin'ny CPU Process ao amin'ny Task Manager
Fomba 2: Manova ny laharam-pahamehana amin'ny CPU ao amin'ny Windows 10 amin'ny alàlan'ny Command Prompt
Fomba 3: Atombohy ny fampiharana iray miaraka amin'ny laharam-pahamehana manokana
1.Press Ctrl + Shift + Esc hanokatra Task Manager.
2. Kitiho ny Antsipiriany misimisy rohy eo ambany, raha efa eo amin'ny fijerena antsipiriany bebe kokoa dia mifindra amin'ny fomba manaraka.
3.Mifindra amin'ny Takelaka momba ny antsipiriany dia tsindrio havanana amin'ny fizotran'ny fampiharana ary safidio Mametraha laharam-pahamehana avy amin'ny menio manodidina.
4. Ao amin'ny menio ambany dia safidio ny haavon'ny laharam-pahamehana ohatra, Avo .
5. Ankehitriny hisokatra ny boaty fifanakalozan-kevitra manamafy, tsindrio fotsiny Ovao ny laharam-pahamehana.
1. Tsindrio Windows Key + X dia safidio Command Prompt (Admin).
youtube dia be entana fa tsy afaka milalao
dingana wmic izay anarana = Process_Name CALL setpriority Priority_Level
Fanamarihana: Soloy ny Process_Name amin'ny tena anaran'ny fizotran'ny fampiharana (oh: chrome.exe) sy Priority_Level amin'ny laharam-pahamehana tianao hapetraka ho an'ny fizotrany (oh: Ambony mahazatra).
3. Ohatra, te hanova ny laharam-pahamehana amin'ny High for Notepad ianao dia mila mampiasa ity baiko manaraka ity:
wmic process izay anarana = notepad.exe miantso setpriority Ambony mahazatra
4.Rehefa vita, araho ny baiko avy hatrany.
Windows 10 fanavaozana mandeha ho azy ny trano
start / Priority_Level Làlana feno amin'ny fampiharana
Fanamarihana: Mila soloinao ny Priority_Level amin'ilay laharam-pahamehana tianao hapetraka amin'ny fizotrany (oh: AboveNormal) sy ny làlan'ny fampiharana feno amin'ilay làlana feno an'ny fisie application (ohatra: C: Windows System32 notepad.exe).
3. Ohatra, raha te hametraka ny haavon'ny laharam-pahamehana amin'ny Above Normal ho an'ny mspaint ianao dia ampiasao ity baiko manaraka ity:
manomboka / AboveNormal C: Windows System32 mspaint.exe
Izay no nianaranao tsara Ahoana ny fanovana ny laharam-pahamehana amin'ny CPU amin'ny Windows 10 fa raha mbola manana fanontaniana momba an'ity fampianarana ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
ny kofehin'ny kajanilan-jiro mijanona ao anaty mpamily fitaovana
Windows 10 lavitra birao nijanona tsy miasa
Force windows 10 vaovao farany 1809
ny vavahady default dia tsy misy fikandrana windows 10
Fampivoarana 2018-09 ho an'ny Windows 10 kinova 1803 ho an'ny rafitra miorina x64 (kb4100347) - hadisoana 0x80080008
ny fomba hiverenana amin'ny fanavaozana ny windows teo aloha
ny fomba fanamboarana ny lesoka diso Windows 10